कुलमानलाई पुनर्नियुक्ति गर्न माग गर्दै माइतीघरमा प्रर्दशन ! « MNTVONLINE.COM
कुलमानलाई पुनर्नियुक्ति गर्न माग गर्दै माइतीघरमा प्रर्दशन !
काठमाडौँ । कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्त गर्नुपपर्ने माग गर्दै युवाहरुले माइतिघरमा प्रर्दशन गरेका छन् । आज (सोमबार) साँझ युवाहरूले माइतीघरमा भेला भएर नाराबारी गरेका हुन् ।
युवाहरुले ‘कुलमान घिसिङलाई पुन नियुक्ती गर, मनपरीतन्त्र मुर्दावाद, सालाहरुलाई नियुक्त गर्न पाइँदैन, साला–सम्धी खारेज गर’, लगायतका नाराहरु लगाएका छन् । त्यस्तै युवाहरुले एमसीसी खारेज गर्न पनि माग गरेका छन् । युवाहरुको ठूलो समूह माइतिघरमा आएर घिसिङको पुनः नियुक्तीको माग गर्दै प्रर्दशन गरेका हुन् ।